Aqoontu waa tarjumaad – JOORNAAL
Aqoontu waa tarjumaad
May 7, 2017 May 7, 2017 ~ joornaal
Waxaan xisaabta ku baranay wax la yiraahdo (Transitive property of mathematics) taas oo dhahaysa haddii ayA la egtahay B, isla markaana ay B la egtahay C, hadaba A waxaa ay la egtahay C.
Waxaad kaloo luuqada ingiriiska ku aragtaa erayo badan oo ay ka horeyso “trans” sida ‘traverse”, taas oo tusineysa wax kala gaaraya laba shay. Ama ‘translate” oo ah wax meel laga qaadayo oo meel kale lageynayo ama laga dhigayo.
Arimahaan waxay noo sheegayaan in haddii aad wax aqoon u leedahay ama khibrad in aad wax kale u isticmaali karto ama kaa saacidi karto. Waxaa laga yaabaa in waxaas aad taqaanid ay la xiriiraan waxaas cusub amaba aysan wax xiriir ah la lahayn.
Waxa kaliya ee muhiimka ah ee in aad ogaatid u baahan waa in markii aad shay si fiican wax uga barato inuu kugu saacidi doono wax kale oo aad aqoontaas ku “transfer” gareyso.
Aqoonta xisaabta ama naxwaha(grammar) wuxuu kaa saaciday in aad garato qormadan qaybteeda hore. Hadii aad maqaayad ka soo shaqeysey meesha gawaarida lagu gado waad ka shaqeyn kartaa, waayo macaamilka dadka ayaa labada xirfadood ka dhexeeya.
Markii ay khibrado kala duwan iyo macluumaad kuu kordhaan ba waxaa sii badanaya nasiibkaaga in aad u isticmaasho shay kale oo noloshaada ku saabsan.
Hadaba markii aad aqoon sii korosataba waxaa kuu siyaadaya fursado aad ku horumariso waxbarashadaada iyo shaqadaada intaba.
Hadaba sida ugu wanaagsan ee aad aqoontaada ku hormarin kartaa waa in aad wax is bartaa oo wax aqrisataa. Cilmigu ma laha da, ee haddii aad 80 jir tahay waa in aad mar walbaa wax kororsataa oo mar walba sal balaadhisaa waxa aad baraneyso iyo maadooyinka aad macluumaadka ka korosaneyso.
Jaamacad ama dugsi sare markaad dhiganeyso waxaa wax kuu diraya mar walba waa macalin oo ku dhahaaya waxaan soo diyaari, buugaan soo aqri, sidaan yeel, kan wax ka soo badal. Noloshaas sidaas ah waxaan ku soo jirnay in ku dhow 30 sano. Goorma ayaad adiga wax barasho aad diyaarsatay oo aad isku horumarineyso aqrisaneysaa? Mid aad adiga dejisay ee jaamacad ama cid kale kuu meerin?
Ogow weligaa laba shay kaalay oo hoo cid ku dhahaysa ma jirto: Lacag iyo Cilmi.
Nin walba wuxuu rabaa inuu lacagtaada iyo cilmigaaga ka faa iideysto. Noloshaada dib u fiiri, weligaa imisa jeer ayaa adigoo iska fadhiya lagu yir waryaa hoo lacagtaan ama waryaa kaalay aan wax ku baree. Waxaa qiyaastaa inta lagu yiri kaalay lacag keen ama kaalay dadkaan wax bar ama dhalaali maskaxdaada oo arintaan xal u keen. Waxaa badan inta wax lagaa rabo u baahan lacag ama aqoon, waxaa yar inta adiga lacag ama cilmi aad kororsaneyso.
Marka in aad hal cilmi fooda saartaa waa fiicantahay, laakiin in aad foodsaarkaas uu noqdo mid keli ku kooban hal qayb oo cilmi ah aadana fiirin wax kale waa qalad ayaduna.
Marka ogow aqoontu waa “Transitive” oo waxaa ay ka soo iftiimeysaa wax walba oo aad faraha saarto marka badso in aad nuuc walboo waxbarasha ah aad wax yara ka fahamto ama ka aqrisato. Aqoontu waa ganacsi mar walba wax kuu soo celinaya intay rabtaba ha ahaatee. Marka waa in aan ku da daalnaa barashada cilmiga.
Haddii aadan jecleyn buugaagta aqriskooda ku dadaal in aad la fadhiisato dadka khubarada ah oo aad dhageysato isla markaana aad wax weydiisao.
Ufiirso markii aad safartid ama dhulka mareysid waxyaabaha aad la kulmeyso adiga oo mar walba isku dayaya in aad wax uun ka faa iideysato ummadaha iyo dadkaas cusub ee aad dhex mareyso. Isku day in aad ufiirsato waxa ka jira gurigaaga, caruurtaada, xaaskaaga adiga oo isku dayaya bal in cilmi kaaga kordho.
Dukaamada xaafadaada bal gal, warso dadka leh iyo kuwa gadaaya, warso kan taxi ga magaalada wada, kan dharka dhaqa, kan hotel ka hortiisa fadhiya. Waad yaabi waxa cilmi ah ee kaaga kordha dariiqyadaas aad iska ag mareyso oo moodo in aysan jirin ba.
Waxaa la yiri nimakii saaxiriinta ahaa ee markii nabi Muuse uu ushiisa maska noqotay Islaamay ma is laameen haddii aysan sixir ka si fiican u aqoonin. Anigu hadda sixir barta idin oronmaayo ee waxaan u soo qaatay muhiim nimada in aanan ka caajisin aqriska iyo wax barashada.
‹ PreviousDhinaca kale ma u rogi kartaa?
Next ›7 shay oo nololosha farxada ka qaada